အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့က ၂၆ - ၁ - ၂၀၂၁ ရက်နေ့ တွင် ဗီဒီယိုဆက်သွယ်မှုစနစ်( Video Conferencing ) ဖြင့် ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသော အမှုစာရင်း
အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ / Posted on January 18, 2021
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 18, 2021
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 16, 2021
1. The people who want to contribute cash donation for the purchase of vaccines, can donate to the COVID-19 Vaccination Fund at Myanmar Currency Account No. OA 013733 of Myanma Economic Bank (Nay Pyi Taw) by using the following methods:
COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 15, 2021
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၊ RTK Differential GPS (1) set (Country of origin-USA) ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 15, 2021
Pyidaungsu Hluttaw Office Announcement (1/2021)
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 13, 2021
1. A total of 203 Pyidaungsu Hluttaw representatives including U Thaung Aye (Pyithu Hluttaw MP in Pyawbwe Constituency, Mandalay Region) submittedaletter dated 11-1-2021, calling foraspecial session of the second Pyidaungsu Hluttaw. The Speaker of Pyidaungsu Hluttaw, by letter No 2/4/10 (5)/ Pa Hta Sa- 2021 dated 12-1-2021, replied MP U Thaung Aye and his group as follows:
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး)တွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်(၆၃)လုံးမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် ပထမထပ်(၁၃၉)ခန်း၊ ဒုတိယထပ်(၃၃)ခန်း နှင့် တတိယထပ်(၆) ခန်းတို့အား (၈−၁−၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် မဲနှိုက်နေရာချထားမှုအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 08, 2021
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်မည့် တိုက်(၁၂၅)လုံးမှ ပထမဦးစွာဆောက်လုပ်သည့် တိုက်(၆၃)လုံးအတွက် ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် မြေညီထပ်(၂၄၉)ခန်းအား မဲနှိုက်နေရာချထားမှု
သာသနာတော်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်း
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 07, 2021